Ahoana no hampitomboanao ny laharana sy hanatsarana ny vidinao amin'ny Amazon Rank Tracker?
Amazon keyword rank tracker dia rindrambaiko ilaina amin'ny aterineto izay natao hanampy ireo webmasters hifaninana amin'ity sehatra varotra ity. Manome fahafahana hampiroborobo ny vokatra Amazon amin'ny mpivarotra isan'andro tsy hita isa ary hampitombo ny volan'ny varotra.
Tokony hampiasa io fitaovana io amin'ny fomba tsy tapaka mba hanatsarana ny fanatrehanao marika amin'ny Amazon. Tokony hanaraka tsy tapaka ny votoatin'ny solo-kevitrao misy anao ianao mba hitazonana sy hanamafisana ny toerana misy anao. Ny fitaovan'ny Amazon tracker dia mamela ny olana rehetra amin'ny alàlan'ny famolavolana ny dingan'ny fanoratana ny teny fanalahidy. Ilainao ny mandany fotoana betsaka amin'ny teny fanalahidy hitadiavana sy fananganana drafitra. Ireo hetsika rehetra ireo dia ho tanteraka mandritra ny fotoana fohy. Ny Amazon tracker dia manamarina ny isa misy anao isan'andro, manome anao ny fampahalalana tena manan-danja sy vaovao. Ohatra, raha fantatrao ny toerana misy ny laharana misy anao, dia azonao atao ny miasa eo ambany fanatsarana azy ireo. Na raha efa manana ny laharana ambony indrindra amin'ny Amazon SERP ianao, dia afaka miara-miasa amin'ny fikarohana fikarohana iray hafa, mampitombo ny vintana amin'ny vokatra entinao amin'ny valin'ny fikarohana.
Izany no antony amin'ny fampiasana traikefa amanga an'i Amazon, dia ho dingana iray alohan'ny mpifaninana aminao ianao.
Inona avy ireo tombontsoa faran'izay manan-danja indrindra amin'ny traikefa Amerikana?
Raha te hahomby amin'ny Amazon ianao, dia mila mahafantatra ny vokatrao misy anao amin'izao fotoana izao ianao
toerana. Izany tahirin-kevitra izany dia afaka manampy anao hanatsara ny laharan'ny sehatry ny Amazon ary hanintona mpanjifa maro kokoa ho an'ny marikao.
Azonao atao ny manara-maso ny fiovana eo amin'ny fizarana
Ny fanovana rehetra ao amin'ny fizahantany dia mampiseho fa nisy zavatra nitranga tamin'ny marikao. Mety ho fihenana na fitomboana eo amin'ny fialan-tsasatry ny Amazon izay tokony hanehoanao avy hatrany. Ireo traikefa amazonin'i Amazon dia manome anao ireo rakitra rehetra ireo ary ahafahanao mandray fanapahan-kevitra hentitra hanatsarana ny toe-javatra misy anao avy hatrany.
Ity fitaovana ity dia mamela ny teny fikarohana vaovao amin'ny rafitra ary hanombatombana ny mety hitrangan'izany amin'ny lisitr'izy ireo Amazon. Ny laharana ambaran'ny Amazon dia hampiseho anao volavolan-pikarohana iray ho an'ny teny fototra tsirairay, izay manome anao fahafahana hamaritra raha toa ka miezaka mitaona izy na tsia. Ny fikarohana avo lenta amin'ny teny fanalahidy tarihina dia afaka manondro ny roa - ny fifaninanana sy ny laza malaza eo amin'ny mpampiasa. Raha ny fitsipika dia sarotra loatra ny manandratra avo ny teny fanalahidy avo lenta, ary mety ho tsara kokoa ny manintona ny fijerinao amin'ny teny tsy misy fifaninanana izay afaka mitondra anao any amin'ny TOP-tsidin'ny valin'ny fikarohana.
Manaova fanadihadiana amin'ny sidina iray
Ity fitaovana ity dia ahafahan'ny Amazon mpivarotra hanaraka ireo teny manan-danja amin'ny mpifaninana. Azonao atao ny manampy ny iray amin'ireo teny fanalahidin'ny mpifaninana aminao, ary ampitahao amin'ny iray mitovy amin'ny anao izany ary jereo ny fomba ambarany. Raha tsy azonao tsara ny dikan'ny teny lazainao amin'ny mpifaninana aminao, dia azonao atao ny manamarina ny lohateniny sy ny famaritana azy Source .